ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျွန်တော် လေ့လာမိသလောက်
Posted by ချစ်ရင်ထူး II on May 11, 2012 in Copy/Paste |4comments
portrait.. ကင်မရာ အကြောင်း ..
ကင်မရာ အကြောင်းရေးလို့ ဆရာကြီးလို့ မထင်မှတ်လိုက်ပါနဲ့ဦးနော် ။ ကျွန်တော်က ခုမှ ဝါသနာရှင် တစ်ယောက်ပါ ။ခုရေးတဲ့ပိုစ့်က မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ ရွာထဲမှာ ဓါတ်ပုံဆရာတွေက အများကြီးရှိတော့ ကျွန်တော်ရေးတာက ဘာမှ ဖြစ်မှာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး ။ ဒါပေသိ ကျွန်တော် က ကိုအင်ဇာဂီ ၊ ကိုလုလင် ၊ ကိုစိန်သော့ ၊ ကိုမှော်ဆြာ တို့ကို မေးမြန်းစူစမ်း မိသမျှ ၊ စာအုပ်တွေ ဖတ်မိသမျှကို စုစည်း ပြီး ပြန်တင်ပေးတဲ့သဘောပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ရွာရဲ့ဓါတ်ပုံပြပွဲုအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုကောင်းပြုနိုင်ပါရဲ့ ဗျာ ..ပြပွဲမှာရိုက်ရမှာက ဈေးသည် ဆိုတော့ …
ကဲ စပြီ ..
Portrait ဆိုတာက အဓိကအားဖြင့် လူပုံရိုက်တာကိုရည်ညွန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ် ..။ သာမန်အလှဓါတ်ပုံရိုက်တာ ၊ ခရီးသွားရင်းရိုက်တာ၊ နေရာဒေသနောက်ခံပြုပြီးတော့အမှတ်တရရိုက်တာတွေဟာလည်း Portrait ပါပဲ.. ဒီ့ထက်လည်းပိုနိုင်ပါတယ် ။ Professional ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေဟာ Portrait ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ subject ကို pose လုပ်ခိုင်းတာထက်သဘာဝအတိုင်းပြုမူပြောဆိုဆက်ဆံ နေတဲ့ပုံတွေကိုနှစ်ခြိုက်လေ့ရှိပါတယ် ။ထူးခြားမှုတွေက ပေါ်လွင်နေရပါမယ် ။
Portrait ပုံတစ်ပုံရိုက်ကူးဖို့ အတွက် အရင်ဆုံး ဘယ် ISO ဘယ် Shutter speed ဘယ် Aperture နဲ့ထားပြီးရိုက်ရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားရပါတယ် ။
Portrait မှာ ဆရာ့ဆရာတွေ အပြောများတာကတော့ AV mode မှာထားပြီးတော့ ရိုက်ဖို့ပါပဲ ။
ISO ကတော့ ကိုယ်ရိုက်မယ့်ပုံဟာ နေ့လား ၊ ညလား ၊Indoor လား Outdoor လား ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် ။ကျွန်တော်တော့ 100-200ပဲ ထားပါတယ် ။(ဆရာတွေရော ဘယ်လိုထားလဲမသိ)
AV mode မှာဆိုရင်တော့ ရှပ်တာ စပိ ကို ကင်မရာကဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။မကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ ဆရာ့ဆရာများကတော့ 1/125 နဲ့ သူ့ထက်နှေးတဲ့ရှပ်တာ ကို သုံးကြပါတယ် ။ကျွန်တော်ကတော့ ထရိုင်ပေါ့ မဝယ်နိုင်သေးလို့ မစမ်းသပ်ရသေးဘူး ။
AV mode နဲ့ရိုက်တဲ့အခါ aperture ကို ဘယ်F.stop နဲ့ရိုက်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရပါတယ် ။ သိထားသင့်တာ တစ်ခုကတော့ F.stop no သေးတယ်ဆိုရင် aperture ကျယ်မယ် D.O.F ကောင်းမယ် ။(အဲဒါတွေကို ဆရာများက ရှင်းပြီးသားတွေ အများကြီးရှိပါတယ် )Portrait ဆိုတာကတော့ Landscape မဟုတ်တော့ အပေါက်ကျယ်နဲ့ရိုက်ရပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ နောက်ထပ်သိထားသင့်တာလေး တစ်ခုက ကင်မရာ Image sensor ရဲ့ ISO နဲ့ shutter speed တို့က ဆက်စပ်မှုရှိတယ် ဆိုတာကိုပါ ။ISO မြှင့်လိုက်တယ် ဆိုတာ အလင်းသိမှုအားကို မြှင့်ပေးလိုက်တာပါ ။ဥပမာ -ISO 100ကနေ 200 ကိုတိုးလိုက်တယ်ဆိုရင် အလင်းသိမှုအားက နှစ်ဆ တက်သွားပါတယ် ။ဒီအချိန်မှာ Shutter speed ကိုမြန်ပေးရပါမယ် ။တူညီတဲ့ EV မှာ ISO 100 နဲ့Shutter speed 1/125 ထားပြီးတော့ ရိုက်တယ်ဆိုရင် .. ISO 200 နဲ့ပြောင်းရိုက်လိုက်ရင် Shutter speed က 1/250 ထားပြီးတော့ ရိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါလေးက ကျွန်တော် မကြာသေးမီကမှ သိခဲ့ရတာလေးပါ ။ ပြန်ဝေငှ တဲ့သဘောပါ ။ ဆရာကြီးလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးနော် ။ share လုပ်တာပါ။
ဟိုတလောက စာအုပ်တအုပ် ကောက်လှန်ရင်း သူရေးထားတာလေး
စိတ်ထဲကမထွက် ဖြစ်နေတယ်ဗျ …
ထုံးစံအတိုင်း ဒုက္ခပေးနေကြ metering mode အကြောင်းဗျာ…
ကျနော်က portraiture အတွက် evaluative mode ကိုနှစ်သက်ပေမယ့်
အဆိုပါ စာအုပ်ရဲ့ အလိုတော်က spot mode နဲ့ ရိုက်ခိုင်းတယ်ဗျ
နောက်တခု manual focus သုံးခိုင်းတယ်..(ဒါကိုတော့ ကျနော်တို့လို focus point နည်းတဲ့
entry DSLR တွေအတွက် လက်ခံပါရဲ့ဗျာ..)
ဆြာသမားတွေရဲ့ အမြင်လေးတွေ လုပ်ပါဦး
compact camera တွေကို manual mode နဲ့ ရိုက်နိုင်မယ့်
ပိုစ့်တခု တင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်…
အဲဒိ ပို့စ်လေး အမြန်တက် လာပါဂျေ.
၀ိုးး.. ၀ို ၀ူ ၀ိုးး ၀ူ ၀ိုးးး ဟို.. ဒီကစောင့်နေသူ..
ဒီမှာ မျှော်လင့်ပီး ၀ိုးးး ဒီကစောင့်သူ…
ချစ်ရင်ထူးတို့ကတော့ တကယ့်ကို ဆရာသမားဖြစ်နေပြီဟေ့ ……… တောင်မစုတ်နော် ညည်းည ၁၂ နာရီ ကင်မလာခလုတ်သာနှိပ် ဖုန်းခလုပ်တော့မှားမနှိပ်နဲ့ အိပ်ရေးပျက်လိမ့်မယ် …….
ကျနော်တို့ ကတော့ ဆရာသမားတွေကြောနေကြတာ